မိုးမိုး | Myanmar Mp3 Album
Home / Myanmar Artist / အဆိုတော် (ကျား) / မိုးမိုး
Category Archives: မိုးမိုး
Rap and Rock သီချင်းများ စုစည်းမှု
Rock and Rap ပေါင်းစပ်ထားတာလေးတွေပါ …. Rock တစ်မျိုးထဲ …. Rap တစ်မျိူးထဲ နားထောင်မဲ့ အစား … နှစ်မျိုးရောပြီး နားထောင်တော့ အသစ်အဆန်းလေးဖြစ်တာပေါ့ …. ဘာကိုမှ မရည်ရွယ်ပါဘူး …. Rock ကော် Rap ကော ကြိုက်ကြတဲ့သူများ အတွက်ပါ။
January 14, 2010 yauo ရဲလေး မိုးမိုး မျိုးကျော့မြိုင် Myanmar Artist NC133Comments
October 31, 2009 [email protected] မိုးမိုး Media 1 Comment